Hashu Maankeey Gataye Ma Masaar Beey Laqday?
WQ. Ikraam Cali-kaar | Jan 28, 2003
Dunidan aanu kunool nahay waxaa dadyowga jooga ay is dheer yihiin aqoonta,kartida, aragtida iyo garaadka Eebbe ku maneystay, taasoo ah adoomankiisa islamarkaasina aaney jirin cid ka qaadi karta.
Hadaba ummadd waliba oo dunidan dusheedda saaran waxey hadana si gaar ahaaneed u leeyihiin caadooyin diin iyo dhaqan u gaar ah oo u ah Astaan lugu garto.
Dhanka soomaaliyeed waxaa uu weligiis ahaa mid ka duwan dhaqamada kale iyo qaaradda aan aduunka kaga naalo ee Afrika,waxaana uu sidoo kale ahaa mid inta badan ku saleysan Diinta Islaamka.
Tan iyo intii ay dhaceen dagaaladii sokeeye ee dalka waxaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee islaamka ah ku dhacay qax, iyo Qaran jabay keenay iney ugu danbeyntii cadowgooda gacmaha hoorsadaan,shaqta qaaradood ee aduunkana meel waba daadsan iygoo aan heysan Qaran difaaca xaquuqadooda.
Dadkii u soo qaxay qurbahana waxaa geestooda haleeshay dhibaatooyin lid ku ah Diinta,dhaqanka iyo magaca soomaal, haba ugu horeysee dhaqamadda silloon oo si deg deg ah loogu xuubsiibtay,iyadoon la ogeyn saameynta ay kuyeelan karto jiilka soo karaya,waxaa intaa dheer dhibaatooyin dhinaca bulshada aafeeyey oo Qabiilka ugu horeeya.
Hadaba hadal badan haan ma buuxiyee waxaa markale maqaalkan iyo mar sadexaadba igu kaliftay inaan ka hadlo, waa gabadhii soomaaliyada lugu sheegay Ayaanka Darrneyd ee Ayaan Xirsi Cali,oo markan arimaheeda noqdeen “Allamtarra Soo dhaaf!” kadib markii ay gaartay heer ay Nabi Muxamed NNKH ay ku tilmaanto Osama Bin Laadin iyo Sadaam Xuseen sida ay qortay shabakad kamid ah shabakadaha Soomaaliyeed oo aan kasoo dheehday qoraal ka hadlaya hadalada waxashnimada leh ee ay ku hadashay gabdhaasi.
Mar aan sidaasi dheereyn ayaa walaalkeey C/raxmaan Ceynte oo arinta gabdhani u arka wax aan qiimo laheyn sheegay in laga harro warkeeda oo kuwa iyada ka daran lala dagaallo,kuwaasoo walaalkeey sheegay iney yihin Qabyaaladda iyo wixii la halamaala.
Inkastoo xagga u darnaanta dadka iyo diinta qabyaaladda iyo dagaal oogayaalku ugu horeyaan ay yihiin, hadana waxaan leeyahay walaalkeey C/Raxmaan marka hore mahadi ha kaa gaarto sida aad ummadda ugu soo gudbin jirtay wararka quseeya gabdhan ee bulshada qaar lasocon.
Marka xiggana hadalada iyo dacaayda raqiiska ah ee ay waddo Ayaan Darantan Aqoon darrida eersatay waa mid aan indhaha laga qarsan karin,waanse ka xumahay inaan waanadda walaalkeey Ceynte aan ka talaabsaddo sababaha la xirriira arimaha aan kor kusoo xusay.
Tan iyo intii Ayaan bilowday iney u ollaleeyso siyaasadda dalka Holland waxaa ay u aragtay wadada keliya ee lugu gaari siyaasadda iney tahay iney aflagaado u geysato qowmiyad ay iyada laf ahanteeda ka dhalatay.
Waxaana wax laga naxo ah in Ayaan oo ah ruux dumar ah garaadkeedana aan sidaasi u dheereyn ay ka dhagito Diinta Islaamka xafiis ay u soo shaqo tagto maalin walba, halka haddii ay cadeysatay iney diinta ka baxday ay faraha kala bixi laheyd arimo aan loo dirsan weli wadda hadalada ku tiri ku teenta ah ee ka dhanka ah Islaamka iyio ehelkiisa.
Kabixitaankii ay diinta kabaxday gabdhaasi waxey sabab uga dhigtay maalintii adduunyadu dhalan rogantay ee 11 september 2001, maalintaasoo aheyd maalin weeraro lugu soo qaaday daarihii dhaa dheeraa ee xaruntii ganacsiga aduunka iyo wasaaraddii gaanshiga dalka Mareykanka.
Inkastoo maalintaasi iyo wixii ka danbeeyey ay aduunyaddu gashay jawi adag iyo marxalad colaadeed,hadana waxaa isweydiintu tahay Ayaan ma maalintaaseey eersatay oo runsatay waxa reer Galbeedku ku sheegeen in “Islaamku Argagaxiso yahay”,mise suntii siyaasadda ee sagaashameeyadii soo heysay baa hada ku dilaacay sidii “Daacuun Calloolaha”?...
Runtii su’aalahan iyo kuwo kale oo dadka maankooda wareerisay ayaan si deg deg ah loo soo dhifan karin. Balse gabadhu hadey Diinta iyo Soomaalinimadii nacday oo maantana tii ugu darneyd lasoo shir tagay waa Ayaan darro maanta guud ahaan tirsaneyso soomaalida islaamka ah,waana mid aan weli laga maqal hadaladda Ayaan ku hadashay soomaalidda qaarkeed ee la oran jiray waa gaalo ee joogay dalka ka hor dagaaladii sokeeye. Halka maanta Ayaan muujisay iney heysato awood buuxdo oo waxey raabto ku sheegto aflagaadana u dheertahay.
Dunida ayaa laga sheegaa in ay jiraan sharciyo xakameynaya aflagaadada loo geysanayo diimaha iyo dhaqamada kale,waxaase Ayaan oo adeeegsaneysa ooraah ay kasoo minguurisay dad nacab u ah Islaamka ay u aragto iney tahay wax wanaasgan in Diinta Islaamka loo geysto aflagaado. Maantana waxaa guud ahaan caalamka ka jirro “Mashaariic” ay dad badani ka dhigteen meelaha keliyaha ee laga heli karro magac, iyo lacag.
Waxaana taasi daliil u ah,dhac dhacdadi ku dhacday Maxadweynihii hore ee Mareykanka Ronald Regan oo nin gabar jeclaa darteed u dhaawacay madaxweyne dhan isagoo ujeeda ninkaasi ahaa magac aad markale ula soo shir tagto gabadha aad heshid, sidoo kale Monica Lewinsky u jeedadii ay xirriirka hoose ula sameysaytay Madaxweyne Bill Clinton uu ahaa mid ay ku dooneysay magac, waana tusaale noogu filin in mashaariicdan ahaayeen welina yihiin kuwo lugu irsaaqad doonto, islamarkaasna aanu hada aheyn mid Ayaan bilowday,balse la oran karro xilli xun iyo meel xun ayey irsaaqada ka doontay.
Ugu danbeyntii anigoon ku dheeraan doonin faallada gabdhan ayaa waxaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed kula talinayaa ineysan sahlan armaha qaar ee gabadhani ay maanta qarka u saaran tahay iney wadada u furto wax magarato badan oo iyada oo kale irsaaqada meel xun ka doona.
Waxaan sidoo kale soomaalida qurbaha jooga aan kula talinayaa in ubbadka soomaaliyeec fiirro gaar ah u yeeshaan,qurbuhuna yahay mid maanta halis u ah dhaqankeena iyo diinteena.
Haweenka soomaaliyeed ee weli islaanimada ku danbeyso kula talinayaa iney abuuraan barnaamijyo wacyi gelin ah oo loogaga hortagayo inaan fasahaad tanoo kale ah aan ummada soo marin!